Barattootni yunivarsiitii barnoota addaan kutuuf 'withdraw' akka hin guutne kallattiin kenname - BBC News Afaan Oromoo
Barattootni yunivarsiitii barnoota addaan kutuuf 'withdraw' akka hin guutne kallattiin kenname
Barattootni yuunvarsiitii bara kana fedha isaaniin barnoota addaan kutuuf murteessan akka foormii ''withdraw'' hin guutne Ministerrii Dhaabbilee Barnoota ol-aanoo kallattii kenne.
Daarikterri komunikeeshinii ministera Barnootaa Itoophiyaa Obbo Dachaasaa Gurmuu, rakkoo nageenyaa uumamaa jiru waliin wal qabatee barattootni hedduun barnoota addaan kutanii galuuf murteessuu danda'u sodaan jedhu jiraachuu himan.
Rakkoon uumame tasgabbaa'aa waan deemuuf barattootni yuunvarsiitii dhiisanii bahuu hin qaban jedhan Obbo Dachaasaan.
Yuunvarsiitota kan akka Waldiyaa, Walloo kaampaasii Dasee, Dambi Doolloo fi Dirree Dhawaatti barattotni jaha walumaagalatti ajjeefamuu himameera.
Yuunvarsiitii Waldiyaa keessatti dabalataan barattotni madaa'anis akka turan gabaafamaa ture.
Yaaddoo nageenyaa Yunvarsiitoota rakkoon keessatti mudate irraa kan ka'e barattotni barnoota addaan kutuun maatiitti deebi'uuf gaafachaa akka turan himaniiru.
Kanaafis bara kana barnoota addaan kutuuf kan murteessan baay'achuu waan danda'aniif ministerri barnootaa kallattii kenneera.
Kunis barattootni barnoota addaan kutuuf foormii withdraw akka hin guutneefi achuma turanii barnootatti akka deebi'an kan jedhu ministeerichi kallattii kennuudha Obbo Dachaasaan BBCtti kan himan.
Rakkoon nageenyaa uumame hin hiikamu taanaan akkamiin achi keessa turuu danda'u kan jedhuuf qaama nageenyaan eegamaa akka jiraniifi yeroo gabaabaatti barnootatti deebi'uu akka malan himan.
Kanaafis yuunvarsitileen biyyattii sababa quubsaa adda tahe irraa kan ka'e barattoota ''withdraw'' akka hin guuchifnedha ministeerri barnootaa kallattii kennuu kan himan.
Image copyright Fuula Feesbuukii Ministerichaa
Goodayyaa suuraa Ministera Barnootaa Itoophiyaa
Humni nageenyaa barattoota maatiitti galuuf mooraatii bahuuf gaafatan akka hin baane ittisuun rakkoo maaliif barbaachise kan jedhuuf Obbo Dachaasaan achii yommuu bahan rakkoof saaxilamuu danda'u jedhan.
Daandii irrattis tahe bakka bahanitti waan isaan mudachuu danda'iu waan hin beekneef mooraa keessa turuutu isaaniif gaariidha jedhan.
Yoo haala kanaan itti deemame barattootni hedduun osoo itti hin yaadiin murteessuu danda'u jedhamee akka yaadames himaniiru.
Tasgabbiin akka bu'uuf ammoo hojjechaa akka jiran himaniiru. Kanaafis barattootni deeggarsa gochuun waliin hojjechuu qabna jedhanii kan barattota callisnee gadhiisnu yoo tahe yuunvarsiitiin cufamuu danda'a jedhan.